Ogeysiis ku saabsan barnaamijka:
Waad ku mahadsantahay xiisaha aad u qabto Waxbarashada. Sababta oo ah dhowaan ku dhawaaqay U beddelo istaraatiijiyaddeena deeqda, mar dambe ma aqbalno codsiyada deeqda cusub ee barnaamijkaan. A barnaamij cusub diiradda lagu saaray dhismaha sinnaan iyo jaaliyado loo wada dhan yahay ee gobolka Minnesota ayaa badali doona barnaamijkan. Ka raadi tilmaamaha barnaamijka dayrta 2020. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg our Bogga kheyraadka marinka wareejinta deeqaha. Hoos waxaa ku yaal qeexitaanka barnaamijka waxbarashada ee Mu'asasada ay mas'uuliyadeeda si dar dar leh hoos ugu dhacday.
Goolka Barnaamijka: Diyaari ardayda Minnesota si ay ugu guuleystaan bulshada adduunka oo sii kordheysa iyagoo maalgashanaya barayaasha, qoysaska la abaabulo, iyo dhalinyarada taageera.
Xarunta McKnight Foundation waxay aqoonsaneysaa waxbarashada inay tahay arrin muhiim u ah maareynta dhaqaalaha iyo madaniga Minnesota. Sidaa awgeed, waxaan ku dadaalnaa inaan xirno fursadaha kala duwan oo aan kor u qaadno siyaasadaha iyo dhaqamada u siman.
Istaraatijiyadayada barnaamijkeena waxaa loola jeedaa in ay saameyn ku yeeshaan nidaamyada waxbarashada iyaga oo bar-tilmaameedsanaya labada kooxood ee waaweyn oo saameyn ku leh natiijooyinka carruurta: barayaasha iyo qoysaska. Hadafkeena hadafkayaga, waxaan:
Sameynta jidadka kala duwan ee barayaasha wax ku oolka ah iyagoo taageeraya dadaal cusub oo lagu diyaarinayo, qoro, iyo haysan tayada tayo sare leh ee dugsiyada Minnesota.
Ka qaybgal qoysaska sida ugu kalsoonida leh ee nidaamka waxbarashada isbeddelka iyaga oo taageeraya iyaga oo u ololeynaya horumarinta dugsiyada, degmada, iyo siyaasadaha iyo dhaqanka gobolka.
Intaa waxaa dheer, McKnight wuxuu taageertaa Dhallinta, kaas oo doonaya inuu yareeyo farqiga jinsiyada ee dhalinyarada Minnesota. Hay'addu mar dambe aqbasho codsiyada maalgalinta mashaariicda maalgelinta waqtigeedii hore. Macluumaadka ku saabsan maalgelinta la xariira dhalinyarada, fadlan soo booqo Dhallinta.
Fadlan ogsoonow: Waxaan aqbalnaa baaritaano furan oo loogu talagalay maalgelinta la xidhiidha horumarinta xirfadda waxbarasho ama qoysaska oo la mariyo codsigeena internetka. Ka dib markii ay shaqaalaha ka fiirsadaan su'aalaha, ururrada la soo xulay ayaa lagu martiqaadi doonaa inay soo gudbiyaan soo jeedin buuxda oo ku saabsan maalgelinta.
2019 Grantmaking at Glance
Eeg Deeqaha dhow
Waxbarashada wararka, fikradaha, iyo ilaha
Maxey Qaadan Doontaa In La Dhiso Garsoor Cadaalad ah oo Minnesota ah?
By Kara Inae Carlisle Noofambar 2019
Isbedelada Isbadelka ah Si Loogu Wareejiyo Himiladeenna Hore
By Kate Wolford, Debby Landesman Sebtember 2019
Ujeedka Minnesota loo siman yahay oo loo dhan yahay
By Kara Inae Carlisle Sebtember 2019
Arag in dheeraad ah
Agaasimaha Isdhaxgalka Barnaamijka / Sarkaalka Barnaamijka
[cinwaanka emailka ilaalinaya]Twitter